guitarist, Greg Lake, guitarist, soo saaraha, heesaha
Gregory Stuart "Greg" Lake(10 1947 November Poole, England -.. 7 2016 London ee December) waxa ay ahayd muusikiiste British, oo gabayaa ahaa, soo saare iyo Xisbi, aasaasay xubin ka mid ah King casaanka iyo Emerson, Lake & Palmer.
60. Summer: Gods iyo King Crimson
Greg Lake waxa uu xiiseynayay muusig tan iyo markii uu dhalinyaro. Emar, Lake & Palmer, "Luujka Man," ayuu qoray markii uu weli iskuulka joogay. 1968, Lake wuxuu ahaa xubin ka mid ah kooxda la yiraahdo Gods. Kooxdani waxay ahaayeen qaar ka mid ah xubnaha dambe ee Uriah Heep. Lake-ka kooxda ee xagaaga 1968 ka hor inta aysan sii deynin albaabadooda hore.
Lake ayaa tagay si loo dhiso King Crimson iyo Robert Fripp, saaxiibkii hore ee dugsigiisa. Tan iyo markii ay Fripp iyo Lake ahaayeen asal ahaan labada guitar, Lake ayaa bilaabay ciyaaro bas ah.
King Crimson's album ugu horeeyayMaxkamada King CrimsonLake wuxuu u shaqeeyay muusig iyo heesaha. Albaabka waxaa asal ahaantii soo saarey soo saaraha Tony Clarke, oo markaas ahaa soo saaraha Moody Blues. Dhowr maalmood ka dib, Clarke wuu baxay, sababtoo ah wuxuu fahmi waayey waxa ay kooxdu isku dayayso inay abuurto. Lake ayaa soo qaaday doorka waxsoosaarka, inkasta oo kooxda oo dhan lagu soo bandhigay albaabka.
King Crimson wuxuu socdaal ku marayay waqooyiga Ameerika isagoo la socday The Nice, taas oo u ahayd safar dharbaaxo ah. In April 1970, ka dib safar this Lake tagay King casaanka iyo si wadajir ah ula keyboardist Keith Emerson ee Nice iyo durbaan garaace Carl Palmer ka Atoomikada diiqii aasaasay seddexda Emerson, Lake & Palmer. Inkastoo uu si rasmi ah uga baxay King Crimson, Lake ayaa ogolaaday inay ka caawiso inay buuxiyaan albaabka labaad, King CrimsonInaad ka soo wareegto Poseidon.
70. Summer: Emerson, Lake & Palmer
ELP waxa ay guulo waaweyn ka soo hooyeen 1970-yadii (iibisay 30 malaayiin albaabood) waxayna wadaagaan qayb muhiim ah horumarinta dhagax horumarineed. Lake ayaa ku heesay heeso badan oo ah heesaha "ELP", hase yeeshee kuwa ugu caansan ayaa ahaa guitest guitars (Shaqada Volume I), "Weli ... Waxaad I Daacisaa" (Qalliinka Saliiga ah) iyo "Sage" ("Sawirrada Sawir"). Lake ayaa noqday dad caan ah kadib markii la sii daayay "Anigu waxaan aaminsanahay Aabbaha Kirismaska" ee 1975, taas oo markii dambe lagu daray albaabka ELP Works Volume II.
In 1973 Lake aasaasay calaamad Manticore iyo qaar ka mid ah fanaaniinta aad u tayo badan saxiixay heshiis sida ahaayeen mutates Talyaani Premiata Forneria Marconi iyo Banco del Soccorso iyo Xisbi King casaanka iyo Emerson, Lake & Palmer Peter Sinfield.
80. xagaaga: Asiya iyo mustaqbalka fog
Ka dib markii la tirtiray kooxda kooxda ELP, Lake 1983 waxay u safartay Asia iyagoo ah bedel ku meel gaar ah oo loogu talagalay John Wetton oo sii daayay laba albaab oo kaliyaGreg Lake(1981) aManeuvers(1983), labadaba waxaa ka mid ah ka qaybgalka guitarist hore ee Thin Lizzy Gary Moore. 1986, oo ay wehliyaan Emerson iyo Cozy Powell, waxay sii daayeen albaabEmerson, Lake iyo Powell, taas oo ahayd isugeyntii ELP ee Powell oo bedelay Palmer, oo markaas ku dhuftay Aasiya.
90. Summer: Mar labaad Emerson, Lake & Palmer
Emerson, Lake & Palmer waxay isu keensadeen bilawga sanadka 1990 iyo repertoire kobcinta dhagaxa ah waxay soo mareen xaflado badan oo xagaaga ah oo ay sii daayeen laba albaabo oo albaabo ah. 1998 waxay lahayd niyad xumo u dhexaysa xubnaha ELP iyo kooxdii ka tagtay kooxda.
2000: Wax soosaarka Hadda iyo Greg Lake Band
Keith Emerson, oo ku jira xasuusiyadiisa, "Sawirada Sawir gacmeed," oo ka soo jeeda 2004, sawirada muuqaalka Glig Lake. Wuxuu ka jawaabey isagoo sheegay inuusan waligiis samayneynin ELP. Tan iyo markaas, wax badan ma uusan arkin muuqaalka muusiga, gaar ahaan markii uu u safray 2001 iyo Ringo Starr oo xubin ka ahaa All-Starr Band. Dhamaadkii sanadka 2003 wuxuu ku ciyaaray guitar baska oo heesta "Real Good Looking Boy" by The Who.
22. Oktoobar 2005 waxay bilaabeen bandhiga munaasabadda bandhiga "Greg Lake Band", oo helay jawaab celin wanaagsan. Bandhigu wuxuu ku ciyaaray David Arch on keyboard, Florian Opahle on guitar, guitar Trevor Barry bass, iyo Brett Morgan ee dushooda. Warner Bros / Sawirada Classic ayaa sii daayay 2006 laba-albaab markii bilawga ah ee Greg Lake uu ahaa mid gaabis ah, codkiisuna wuxuu ahaa mid qoto dheer oo ka sii badan intii hore. Greg Lake Band waxaa loo malaynayay inuu booqanayo safarka 2006 bisha Sebtembar, laakiin waxaa loo yeeray daqiiqadii ugu danbeysay sababo la xiriira "dhibaatooyinka maamulka."
Greg Lake 21. December 2006 wuxuu heestaa heesaha "Karn Evil 9" oo ay la wadaagaan Orchestra Trans Transponder at Nassau Coliseum ee Uniondale, New York.
Wuxuu ku dhintay magaalada London xNUMX. Diisambar 7 da'da 2016 ka dib markii la dagaallama kansarka.
1995King Biscuit Flower Time Waxay soo bandhigaysaa Greg Lake ee Concert
1997Greg Lake Retrospective: Laga bilaabo Bilowga
1998Laga soo bilaabo Underground: Bootilka rasmiga ah
1981Jacayl badan ayaad tahay
1981Ha i jecesho ka hor intaadan tegin
5: Waa kan ugu fiican ee Emerson, Lake & Palmer
7: Wakhtiga Poseidon
9: Shaqada Volume 1
14: Maxkamada King Crimson
15: Tilmaamaha 21steer ee Boqortooyada King - Halbeegga - 1969-1974
16: Magacaygu waa Earl
20: Asia (koox muusik)
25: saaxiibo saaxiibtinimo
27: Liiska magacyada hockey ee MS 2011
29: Liiska Bassisters
31: Dib uga soo horjeeda derbiga
33: 1970 muusikada
37: Maraykanka oo ka socda ciyaaraha Olombikada 1984
38: Helix (kooxda muusikada)
39: Koobka Aduunka 1997
40: Ragga Hockey-ka ee ciyaaraha Olombiga Winter 2014
41: Connecticut Furan
45: Daboolka hoose
46: Liiska magacyada hockey ee MS 2015
49: Saaxiibka (Mormonism)
Stuart Gregory "Greg" Lake (. 10 1947 November Poole, England -. 7 2016 London ee December) waxa ay ahayd muusikiiste British, oo gabayaa ahaa, soo saare iyo Xisbi, aasaasay xubin ka mid ah King casaanka iyo Emerson, Lake & Palmer.
album studio ugu horeysay Greg Lake ee is-cinwaankeedu Greg Lake. album ayaa la sii daayay bishii October 1981 leh calaamadda Chrysalis Records oo uu soo saare Greg keligiis ahaa Lake.Seznam skladebObsazení Greg Lake - gitaarka, zpěvGary Moore - kytaraSteve Lukather - kytaraDean Parks - kytaraW. G. Walden - kytaraGreg Mathieson - klávesyBill Cuomo - klávesyTommy Eyre - klávesyMichael Giles - bicíJeff Porcaro - bicíJode Leigh - bicíTed McKenna - bicíTristian Margetts - baskytaraDavid Hungate - baskytaraWillie Cochrane - pipeDavid Milner - pipeClarence Clemons - saxophone
Emerson, Lake & Palmer (oo loo soo gaabiyo ELP) waxay ahaayeen koox hoosaad English ah oo dhagax ah. 70. sanadihii qarnigii la soo dhaafay ayaa aad u caan ah, waxay ku iibiyeen 40 malaayiin albaabood waxayna qabteen riwaayado waaweyn. Kooxdu waxay ka kooban tahay Keith Emerson (koontooyinka), Greg Lake (guitar, bass, vokal) iyo Carl Palmer (duufaanyo, curiye). Saddexda dhagaxaan, oo laga aasaasay 1970, waxay qaadataa qaar ka mid ah shaqooyinka muusikada qowmiyadaha Yurub ee shaqadooda, waxaana lagu dari karaa wakiilada dhagax horumarineed iyo astaanta.
Emerson, Lake & Palmer waa albaabka ugu horeeyay ee albaabka laga soo galo kooxda Britishka ee Emerson, Lake & Palmer. Diiwaangelintiisa ayaa dhacday sanadki hore ee 1970 ee Advision Studios ee London si loogu soo saaro Greg Lake. Boqortooyada Ingiriiska ayaa albaabka loo sii daayey Oktoobar 1970; Maraykanka ilaa Janaayo 1971. 2012, album ayaa lagu sii daayay dib-u-celinta.
Tarkus waa qaybta labaad ee riwaayadaha ah ee kooxda dhagaxa ah ee Britishka ee Emerson, Lake & Palmer. Diiwaangelintiisa wuxuu ku jiray 1971 bishii Janaayo ee Advision Studios ee London. Waxaa soo saaray Greg Lake, albaabkii waxaa la sii daayey bishii June ee 1971 diiwaanka Iceland.
The Best of Emerson, Lake & Palmer (1994) waa Emerson, Lake & Palmer.Seznam track group dhagax weyn album duwidda ah "tan iyo bilowgii" (4: 13) "Yeruusaalem" (William Blake, C. Hubert H. Parry) (2 : 44) "Weli ... Waxaad Me On soo noqda" (2: 53) "iclaamiyay Man Wadajirka ah" (Haaruun Copland) (Solo version 2: 57) "Mindi Edge" (5: 05) "TARKUS" (20: 35) "qarax" (2: 43) "Stones of Years" (3: 44) "Iconoclast" (1: 15) "Mass" (3: 11) "Manticore" (1: 52) "dagaalka" (3: 51) "Aquatarkus" (3: 59) "Karn Xun 9 1 Part 2st Aragtida" (4: 43) "C'est La vie" (4: 16) "Hoedown" (Haaruun Copland) (3: 43) "Forbrydelsen "(8: 53)" Honky Tonk tareen Blues "(3: 09)" Black Moon "(version hal, 4: 46)" Lucky Man "(4: 37)" waxaan rumeeya Aabbaha Christmas "(Greg Lake) ( asalka version Solo 3: 30) "Peter Gunn" (bo Norrland track)
Epitaph waa sanduuqa sanduuqa Rock Crimson rock band. Waxaa lagu sii daayay 1997 (eeg 1997 ee Music) waxayna soo bandhigtaa riwaayadaha iyo rikoodhada rikoodhada ee band ka bilowgii hore, laga bilaabo 1969.
Wake of Poseidon waa albumka labaad ee kooxda Rock band ee King Crimson. Waxaa lagu sii daayay 1970 (eeg 1970 muusikada), iyo muusikada muusikada ee muusikada UK ayaa lagu meeleeyay 4. meesha, taas oo ah natiijada ugu fiican ee King Crimson.
Dean Parks (* 1947) waa guitarist American ah, ninkeeda Carol Parks. Wuxuu ku dhashay Fort Worth, Texas, 1970 wuxuu u guuray Los Angeles. Intii lagu guda jiray xirfadiisa ciyaareed uu u soo ciyaaray dhowr boqolaal cajalado iyo gacan saar la leeyihiin fannaaniin badan oo ay ka mid yihiin Leonard Cohen, tusaale ahaan, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Lizz Wright, Greg Lake, Billy Joel, David Cassidy iyo Art Garfunkel. Wuxuu badanaaba u shaqeyn jiray fanaaniis, laakiin sidoo kale wuxuu ku ciyaaray riwaayadaha, sida 1977 with Root. Sannadihii 2005 ee 2011 waxay la socdeen labada ciyaaryahan ee David Crosby iyo Graham Nash.
Shaqada Volume 1 waa barnaamijka shanaad ee studio ee kooxdii dhagxaanta ee Ingriiska Emerson, Lake & Palmer, oo lagu sii daayay 1977. Tani waa album labaad (2 LP, kadibna 2 CD) waxaana loo qaybiyaa afar qaybood oo waaweyn.
Ilaahyadu waxay ahaayeen koox Ingiriis ah oo lagu aasaasay 1965, oo ka soo horjeeda Uriah Heep. Taariikhda skupinyMick Taylor (ka dib John Mayall & Bluesbreakers ah), Brian Glascock (ka dib Gees ee Bee iyo Muteelka The) iyo John Glascock (Cirib ka dib Fat oo Yetroo Tull), waxay ahaayeen kuwo isku fasalka dugsiga ee Hatfield iyo wada ciyaaray band ah oo lagu magacaabo Juniors The (sidoo kale Shisheeyaha), oo ay aasaaseen 1962. Ciyaartoydooda ayaa ahaa ka dib Malcolmol Collins iyo Alan Shacklock. At Columbia diiwaan ugu horeysay hal "Waxaa jira gabar quruxsan / Size Pocket" (Columbia DB7339), kaas oo soo baxay ee 1964.
Peter Giles (* 17 1944. June Havant, Hampshire) waa bassist ah British iyo zpěvák.V sano 1967 wada aasaasay la walaalkiis, durbaan garaace Michael, iyo guitarist kooxda Robert Fripp Giles, Giles iyo Fripp. Ma aysan helin wax guulo ah laakiin waxay sii daaysay dhowr kalfadhi iyo hal albaabo. Xilligii dayrta ee 1968, Peter Giles waxaa lagu bedelay Greg Lak, oo sameeyay aasaaska King Crimson. Taa waxaa ka duwan, goor hore 1970 tagay Lake Giles ciyaaryahan Bass ku lug album labaad ee guutadii xaq In Wake ku Bosidon ah.
Gregory John Norman AM (* 10 Febraayo 1955, Mount Isa, Queensland) waa golaha Australia. 80. iyo 90. sano 20. qarnigii wuxuu ahaa wadar ahaan toddobaadkii 331 ee hoggaamiyaha adduunka. Goolku wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo sanadaha 15 iyo afar sano kadib wuxuu helay wareegga xirfadeed. 1976 wuxuu ku guuleystay tartankii ugu horeeyay (West Lakes Classic ee Adelaide) isla markiiba wuxuu bilaabay inuu ku riixo wareegga PGA.
Ereyga superskupine wuxuu inta badan ka hadlaa muusikada muusikada kooxo heeso iyo fanaaniin caan ah. Supergroup la sameeyey si tartiib tartiib ah, inta lagu guda jiro isbedel joogto ah shaqaalaha in la sameeyey si dabiici ah in kooxaha (sida Haa, King casaanka) ama la abuuray ka xoq ka fannaaniin yaqaan (sida Emerson, Lake & Palmer, hoggaamiyo Zeppelin, Cream). supergroup Qaar ka socday muddo toban sano ah, laakiin nolosha ugu iyaga ka mid ah oo ahaa mid gaaban iyo burbur inta badan la socda colaadaha u dhexeeya shakhsiyaadka xad-dhaafka ah oo waaweyn.
Maxkamadda Crimson King's Court, oo cinwaankeedu yahay "Korjoogteynta" King Crimson, ayaa albaab udubdhexaad u ah 1969, oo ah kooxda British-ka ah ee Royal Crimson. Maqaalkani wuxuu gaadhay 5 ee ku yaalla UK. meelaha. Dalka Mareykanka, wuxuu helay RIAA Gold Plaque waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah mawduucyada muusigga dhagaxa ah.
21st Century Hagaha King casaanka - Volume One - 1969-1974 sanduuqa doorashada, dhigay guutadii British dhagax weyn King casaanka. Waa la sii daayay bishii October 2004 (eeg 2004 in music) .Tani čtyřdiskový sanduuqa set waa qaybta hore ee dhamaystiran cross-qaybta of King casaanka, kuwaas oo ay diyaarisey hoggaamiyaha iyo xubin joogta ah oo kaliya, guitarist Robert Fripp. 21st Century Hagaha King casaanka - Volume One - 1969-1974, sida ay magaca soo jeedinaya, ka hadlaya abuurista band tan 1969 hor September 1974 Fripp kala diray. Sanduuqa waxaa ka mid ah laba sawir oo ah rikoodhada rikoodhka iyo laba cajalad oo rikoodh oo rikoodh ah oo hore loo sii daayay.
Magacaygu waa Earl waa joornaal Maraykan ah oo ay samaysay by soo saaraha Mareykanka Greg Garcia iyada oo lala kaashanayo 20th Century Fox. Taxanaha ayaa laga soo duubay 20. Sebtembar 2005 ilaa 14. May 2009 oo ku saabsan NBC. Dalka Jamhuuriyadda Czech wuxuu taxanahan ka bixiyaa Prima Cool.
Peter John Sinfield (* 27 1943. December Fulham, London) waa artist Ingiriisi, Abwaan iyo muusikiiste, oo loo yaqaan iyo qoraa oo xubin ka ah band dhagaxa King casaanka, kuwaas oo co-aasaasaha.
Colin Flooks, oo loo yaqaan layareeyo Powell (29 1947 December, Cirencester, England -.. 5 April 1998) ahaa dhagax weyn bubeník.Svou ah xirfadiisa muusikada British bilaabay in kooxda The saaxiriintiina wuxuu ku 1965. In 1971 uu ku soo biiray Beck Jeff ee Group kan la duubay laba albums, ka dibna Solo ciyaaray iyo kooxda la aasaasay Bedlam. 1973, oo keliya ayaa keligiis ah, Dance With The Devil, kaalinta saddexaad ee liiska ku dhuftay UK. Sannadkii soo socda Cozy wuxuu caan ku noqday markii uu ku ciyaarayay telefishanka oo uu garaacay rikoodhka sida ugu dhakhsaha badan. Waxa kale oo uu BBC-da u soo bandhigay carruurta loogu yeero Record Breakers.
Robert Fripp (* 16 1946. May socdaan London Wasiirka, Dorset) waa guitarist British, soo saare iyo laxamiistaha, oo loo yaqaan xubin joogto ah ka keliya ee guutadii horusocod ah dhagaxa weyn King casaanka. Shaqadiisa afar sano ka dib waxay soo martay qaabab badan oo muusikada ah. Fripp wuxuu dhigayaa 42. Muuqaal ku yaal magazine Rolling Stone "100 guitarists ugu fiican".
Aasiya waa koox hoosaadyo dhagax ah oo ay sameeyaan xubno hore oo ka tirsan Yes, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Hold the Ladder, Uriah Heep, UK iyo Buggles in 1981.
King Crimson waa koox dhagax ah oo British ah oo ay aasaaseen guitarist 1968 Robert Fripp iyo gabadha Michael Giles. Sida caadiga ah, waxaa ka mid ah ka mid ah group aasaasay dhagaxa horusocod in iyada shaqada laysku daraa saamayn of Hababka kala duwan ee muusikada sida jazz, music classical oo tijaabo ah, ayaa dhagaxayga weyn psychedelic, biraha culus, ruxruxo cusub, dhagaxyada adag, gamelan, dad, electronica iyo durbaanka iyo Bass. Asal ahaantii koox Ingiriis ah ayaa soo jiidatay muusikeyaal ka socda Boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka ilaa 1981.
Peterborough waa magaalo ku taal gobolka Canadian Ontario. Waxay ku taallaa 125 waqooyi-bari waqooyiga Toronto. Peterborough waa Matxafka Canadian Canoe, oo ah matxafka kaliya ee khaaska ah ee kaneecada Waqooyiga Ameerika. Magaalada Ontario, magaalada waxaa loo yaqaanaa saldhig u ah goobaha madadaalada ee Kawarthas. Peterborough waxaa loo magacaabay Peter Robinson, oo ahaa siyaasi Kanada ah, mid ka mid ah qabanqaabiyeyaasha socdaalka gobolka.
Misha Mengelberg (5 Juun 1935 Kiev - 3 March March 2017 Amsterdam) wuxuu ahaa najaxii jasiiradaha ee Dutchka. Waxa uu ku dhashay magaalada Kiev oo ahaa wiilkii u dhashay carwada Karel Mengelberg, dhammaadkii 1930-kii wuxuu qoyskiisa degay Nederland. Wuxuu bilaabay inuu ciyaaro biola da'da shan jir, iyo 1958 ilaa 1964 ayuu wax ka bartay Konserfatifka Hague. Wuxuu markii ugu horeysey diiwaangeliyey 1964 American Eric Dolphy. Intii uu shaqadiisa hayay, wuxuu la shaqeeyay fanaaniin kale, oo ay ka mid yihiin Steve Lacy, Peter Brötzmann, Louis Andriessen, Pino Minafra iyo Roswell Rudd. Waxa uu sidoo kale sii daayay dhowr ka mid ah asxaabtiisa gaarka ah. 2005, tusaale ahaan, Senne Sing Song (Tzadik Records), oo kaashaday Greg Cohen iyo bareeraha Ben Perowsky.
Kenny Davern (. Magacaaga dhalashada John Kenneth Davern,. 7 1935 January Huntington, New York, USA - 12 2006 December Sandia Park, New Mexico, USA) ahaa clarinetist Maraykan ah. Xirfadlaha jasiiradda cad ee jasiirada, wuxuu go'aansaday inuu arko Pee Wee Russell markii ugu horeysay; wuxuu bilaabay inuu ciyaaro isagoo da'diisu tahay kow iyo toban. sano 1954 uu ku soo biiray kooxda Jack Teagarden iyo 1958 sii daayay album ugu horeeyay ee magiciisa loo yaqaan In Gloryland hoostiisa. Intii lagu guda jiray xirfadiisa ciyaareed uu la kaashanaya muusiikaystayaal kale, oo ay ku jiraan Ken Peplowski, Steve Lacy, Greg Cohen iyo Paul Motian. Wuxuu u dhintay kalkaaliye wadnaha ah markuu gaaray da'da toddobaatan.
Crazy Ex-Girlfriend waa taxane taleefishanka muusikada ah ee muusikada-muusikada, oo ay baahisay CW. Qorayaashii taxanaha ahaa Rachel Bloom iyo Aline Bosh McKenna. Bandhigga waxaa laga sii daayaa 12. Oktoobar 2015. Tan iyo markaas, waxaa jiray wadar ah hal taxane ah 18, oo leh xirmooyinka TV-ga 2016 / 2017 ee soo socda. 8. Bishii Janaayo 2017 ayaa xaqiijisay duubista taxanaha sadexaad, kaas oo lagu hormariyay 13. Oktoobar 2017.
Martin P4M Mercator wuxuu ahaa diyaarad gawaarida gawaarida ah oo ay dhiseen shirkadda Glenn L. Martin. Mercator wuxuu ahaa mid aan lagu guuleysan karin ee Badda Maraykanka ee badmaaxiinta badweynta ee Maraykanka. Tartanka waxaa ugu dambeyntii ku guuleystay Lockheed P2V Neptune. Mercator wuxuu leeyahay adeeg xaddidan oo loo yaqaano duulimaad farsamo oo dheerad ah. Muuqaalkiisa ugu weyni wuxuu ahaa in ay ku shaqeyneyso isku-darka mishiinka iyo mootooyinka.
Xeegada Barafka Championships World 2011 16 ka qeyb galay qaranka týmu.Soupiska American týmuTrenéři Scott Gordon, Phil Housley, Greg CroninSoupiska Belarus týmuTrenéři Eduard Zankovec, Vladimir Tsyplakov, Aleksandr AndlexejevSoupiska Czech týmuTrenéři Alois Hadamczik, Josef PalečekSoupiska Danish týmuTrenéři Per Bäckman, Tomas JonssonSoupiska Finnish Jukka týmuTrenéři Jalonen, Petri Matikainen, Pasi NurminenSoupiska Faransiis týmuTrenéři Dave Henderson, Pierre Pousse, Lionel CharrierSoupiska Canadian týmuTrenéři Ken Hitchcock, Scott Arniel, Peter DeBoerSoupiska Latvia týmuTrenéři Oleg Znarok, Leonids Beresnevs, Harijs VītoliņšSoupiska Jarmal týmuTrenéři Uwe Krupp, Ernst Höfner, Harold KreisSoupiska Norwegian týmuTrenéři Roy Johansen, Knut Jørgen Stubdal, Per-Erik AlcénSoupiska Austria týmuTrenéři Bil Gilligan, Manny Viveiros, Kurt HarandSoupiska týmuTrenéři Ruush Vyacheslav Bykov, IG ama ZacharkinSoupiska Slovak týmuTrenéři Glen Hanlon, František Hossa, Ĺubomír PokovičSoupiska Slovenia týmuTrenéři Matjaž Kopitar, Nik ŽupaničSoupiska Swedish týmuTrenéři Pär KAAH, Roger Rönnberg, kooxda Stefan LadheSoupiska Swiss
MIT Daedalus 88 ahayd diyaarad aadanaha ku shaqeeya dhisay ee MIT (MIT, Cambridge, USA), taas oo 23. April 1988 115,11 duulay fogaan ah kiiloomitir saacaddiiba iyo daqiiqo 3 54.
ciyaartoyda Bass Czech AZ Douda Milan (Jan Sezelim, iyo meelahoodii burbursanaa, gooyn, dhawaaqyada kaymaha, CA-NA Band, Dr. Jane) Mark Bero (Low jannada, ex Krucipüsk) Bronislav "Bruno" Kovarik (Krabathor) Zbynek Rýpar (Liveevil) Karel Ferda ( Traktor) Karel Maly (Acoustix) Mark Ibraahim (SK) - (Fleret) Vladimir Adamský - (Santa) Jakub Antl - NightworkMilan Hanak - (Titanic) Gusta - ProhibiceRobert Balzar -. (tusaale ahaan Koonfur Afrika, D. Bárta & Illustratosphere Hana Hegerová) Flamengo (tusaale - Oto Bezloja (Matadors) Milan Broum (Olympic) Filip BenešovskýOndřej Bohemia - KvětyVilém Čok - (New Rose, xulashada Prague) George "Maarta" Dvorak - (Našrot) Kohout - Zdrawej důchodLuboš Vršanský (Elementa, Ahard) Pavel Fort. ) Pavel Galler - (Dreadrot) Jan HaisJan Hromas - (Kučerovci, hore ayaa sidoo kale Greenhorns) Marek "Mara" Kohout - (Sandra iyo iyada Vembloudi) (xuudka) Matthew Havlicek - (Chamber Worcester, Vision Final, Fastfood, JamiroquaiCZ, Michal Foret , Multiplayer) M ATO Ivan (SK) - (Miikaal Pavlicek, BSP, maansalugaleyda, Krucipüsk, Gaba Al Dhábba), Fredrik Janáček - Jakub Janků (-123 min, Sun Orchestra.) - (ex. Thesaurus, Wolfarian) Honza KrausMichael Beautiful - Laco DécziZdeněk Kub - (Arakain) Vladimir Rubber KulhánekMartin Light - Lucie BíláPavel Chrastina OlympicVláďa Caisek - Buffalo BillJiří Meisner - (cawska labaad, Kamelot) Mardoša - (Tata Bojs) Petr Novotny - (Zalman & spol. , Cohiba) Vojtěch Novak - Koudelníkův synVladimír PadrůněkPeter Pavlik - (Yo Yo Band) Petr Rotschein - (Kamelot) Milan sheet - NedvědiFrantišek RabaPavel Jakub RybaRichard Scheufler - (Sheuflers, Prague xulashada II, King Size) Milan Špalek - (jubbad dheer) Martin ŠtecSvatopluk ŠvábJiří Vesely - (. tusaale Big Brothers madaxdii haabniim) Otto Kokštein - (Waa waalli tusaale ahaan.) Karel ŠípPepa Šiko - (Doga) Miikaal Šerák - (heshiis Siyaad Bare, 2Wings, Daryl Green) Franz Franz Fiedler- (DTR) Jindra Vobořil - (tusaale . Xir Up, Jeermiska, Gen, saar, 39 Gaarka ah) Miroslav Vitous - (Report Weather) Kůstka Josef - (Blue Saamaynta) Jiří Kucera DrnecVojta (boodboodo Reunion Band) George "Old Man" Sindelar - (higsiga) Petr Kuliš Kujal - (Streetmachine) Kembelín Prokeš - (Lucky Nero) Martin "Donald" Donat - (Booters) Miikaal Voldřich - (Pipeline) Pavel "Chozo" Jurda - (Bluesberry) PBCH. - (Lucie, Wanastowi Vjecy)
Crazy Horse waa koox asxaab ah oo Mareykan ah oo loo yaqaano Neil Young. Laga soo bilaabo 1969 illaa iyo maanta, Crazy Horse iyo Younge waxay ku diiwaan galiyeen studio 11 iyo dhowr albaabo oo ay ku nool yihiin. Albaabada waxaa loo sii daayaa Neil Young iyo Crazy Horse. The Crazy Horse, ee xNUMX - 1971, ayaa sii daayay lix sawir oo studio ah.
Dib uga soo horjeedda derbiga waa albaabka studio Billy Sherwood, oo lagu sii daayay 2005. Waxa uu la shaqeeyay muyuusiko badan oo ka soo jeeda kooxo caan ah oo caan ka ah Sherwood album. Maqaalkani wuxuu tilmaan ka soo galaa Wall Street oo ka yimid Pink Floyd. 2006 ayaa sii daatay albaab kale, oo ku yaalla dhinaca Madow ee Muuqaalka (sidoo kale Pink Floyd), waxaana loo yaqaan "Return to the Dark Dark of the Moon".
November waa 314 ah. maalin ee sannadka ee kaalendarka Gregorian (315. maalinba sano boodid a). By dhamaadka sanadka weli 51 maalmood. Holiday dabaal Evžen.UdálostiČeské země1620 - Laba maalmood ka dib Battle of White Mountain ee Prague casaanka ka ciidamada Ferdinand II. Štýrského.1664 - Aasaasay Sheeko královéhradecká.1989 - Marka uu dhaco shil tareen oo u dhow New Kopisty dilay 6 dadka 58 oo halkaasna waxaa joogay zraněno.Svět1444 - drive Salibiiga of King Vladislav III. Varnenčika looga adkaaday ee Battle of Varna Turkiga uu hogaaminayo Murad II. iyo Vladislav waxaa zabit.1494 - waxaa la daabacay buugga ugu horeysay ee waaweyn ee xisaabaadka Summa de Arithmetica, joomateri, tirada by Luca et qabadaha Pacioli.1871 - Henry Morton Stanley helay nin socoto ah lumay David Livingstone dhow u gudubno Tanganika.1918 - Dhawaaqay Saxon republika.1970 - bilaabay rover moon 1.Narození Czech 1719 - Jan Krumlov, laxamiistaha iyo Iduna Viola d'raacsan († 24 1763 September.) 1772 - Johann Nepomuk Kanka, laxamiistaha iyo qareen († 15 1865 April.) 1812 - Josef Jaroslav Křičenský, revivalist Czech qoraaga (. † 16 April 1886) 1828Konrad Bayer, laxamiistaha chess, qoraaga yeedhay shaqooyinka aan dhiman († 21 September 1897.) Franz Urdun, ganacsadaha Czech iyo siyaasi u dhashay dalka Jarmalka († 9 December 1884.) 1834 -. Martin Josef Novacek, kaari, laxamiistaha iyo music macalinka dibadda (. † 19 1906 March) 1845 - Karel Vrba, mineralogist, Birmingham Ka (7 † 1922. December) rlovy, siyaasi 1869Wilhelm Elsner, heesaa opera († 26. ? August 1903) Miikaal Tomik, siyaasi Czechoslovak (†) 1872 - Francis Klokner, Birmingham ee Jaamacadda Czech Technical († 8 January 1960) 1874Otakar Bradáč, laxamiistaha († January 11 1924) Leopold Škarek, gobolka Jesuits ah († 23... March 1968) 1875 - Václav Myslivec, siyaasi Czechoslovak († 29 May 1934) 1876 -. Martin Bohdan Lany, socotada Czech, ganacsade iyo adeeggiisa († 1941) 1880 -. Bohumil taxadar, guud vicar of dhacay dilal ee Prague († 20 May 1965) 1883 - Bedrich Antonin Wiedermann, Iduna xubin, macalinka music iyo laxamiistaha († 5 1951 November.) 1886 - růžena šlemrová, atariishada Czech († 24 1962 August.) 1894Stanislav Mentl, MS. Wasiirka Caafimaadka Dadweynaha iyo Waxbarashada Jirdhiska († 12 1981 September.) Jaroslav Vacek, legionnaire iyo dagaal iska caabin ah († 23 1944 August.) 1899 - Jan Roth, Czech filimka (. † 4 1972 October)
UdálostiFestival Isle of WightSteve Howe bedelay in kooxda Haa guitarist Peter BankseZaložené skupinyThe Doobie Brothers, hore dareen, ku salaysan Tom Johnston, Patrick Simmons, John Hartman, Dave Shogren.Electric Light Orchestra aasaasay by Roy Wood, Jeff Lynne iyo Bev Bevan.HorslipsKantořiOceanQueen aasaasay saddexda xubnood ugu horeysay Freddie Mercury, Brian May iyo Roger Taylor. Bassist John Deacon biiri doona in 1971.StyxEmerson, Lake & Palmer Keith Emerson, Greg Lake iyo Carl Palmer.Earthen VesselZaniklé skupinyThe Beatles muuq beelayo. Dhammaan xubnaha saari Solo alba.The Dave Clark FiveThe MonkeesSimon & Garfunkel muuq iyo labada xubnood oo ka tirsan labada Solo gaaray kariéru.The muuq beelayo Nice. Keith Emerson ku salaysan ELP.Zemřeli17. January - Billy Stewart, heesaa (32 sano) 3. September - Alan "Blind guumays" Wilson, oo xubin ka ah Qasacadeysan Heat (27 sano) 18. September - Jimi Hendrix, ka guitarist iyo fanaanada (27 sano) 19. October - Janis Joplin, heesaa (27 sano) AlbaDomácí Coniunctio - Blue Saamaynta oo Jazz Q PrahaKlíč aqoon - Ururka Progress (EP) Isnasiinta - The Blue EffectSynkopy 61 - Synkopy 61 (EP) Dibadda 12 Songs - Randy Newman Beard of Stars - Tyrannosaurus Rex Song ii - FamilyABC - Jackson 5Abraxas - SantanaAfter Rush Gold ah - Neil YoungAirconditioning - qalooca Waxyaabaha AirAll Waa Gudub - George HarrisonAmerican Beauty - mahadisaan DeadAmerican Haweenay - WhoAnyway qiyaasayaa The - FamilyAtom Heart Hooyo - Pink Floyd cashuur Jack Johnson - Miles Davis cashuur Best maydhan biyaha Player kaman ee aduunka - Merle Haggard, CountryBand of Gypsys - Jimi HendrixBarrett - Syd BarrettBenefit - Yetroo TullThe Best of Floyd Pink ah - Pink FloydThe Big O - Roy OrbisonBill Haley ee sawrirrada: Degganaanta aakhirkeedu wuxuu u qadhaadh - Bill Haley CometsBitches uu & dhiga - Miles Davis, JazzBlack sabtida - Black SabbathBridge badan oo dhib d Water - Simon & GarfunkelCanto libre - Víctor JaraChanges - MonkeesChapter 2 The - Robert FlackChicago (mararka qaarkood loo Gudbiyay sida Chicago II) - ChicagoClimbing! - MountainCloser ee Home - Grand Funk RailroadClose inaad - CarpentersCome Si My Garden - Minnie RipertonCosmo ee Factory - Creedence Clearwater RevivalCucumber Castle - Gees Bee The
Hershey Bears waa koox kubadda hockey oo ka shaqeysa Hockey League. Kooxdu waxay ka shaqeysaa Hershey, Pennsylvania. Hoygooda gurigooda waxaa lagu ciyaaraa garoon xarun weyn. "Boobka" waa kooxda ugu dheer ee AHL - maaddaama 1938 ay tartanka ku jirtay. Kooxda waxay ciyaartay 20. Diisambar 2006 5,000. cayaarta tartanka. 2010, kooxda ayaa ku guuleysatay koobkeedii 11aad ee Calder Cup, koob ku guuleystay AHL, oo ​​ah taariikhda ugu sareysa taariikhda horyaalka.
Jackass waa barnaamij telefishan oo Maraykan ah oo ka socda MTV oo ka socda 2000 ilaa 2002. Tani waa koox dad ah oo soo jiidata dhib badan, halis ah, qosol leh, laakiin sidoo kale xaaladaha cayda. Dhamaadkii bandhigga, filimada 4 waxaa lagu sawiray dabaaldega Jackass, mid ka mid ah xittaa xitaa 3D. Labada filim ayaa lagu dhaleeceeyay fannaaniinta xirfadlayaasha ah. Bandhigga iyo dabeecadahoodu waa kuwo aad u jecel dhallinyarada; Waalidiintooda nooca madadaalada ah ee lagu soo bandhigo Jackass, caadi ahaan ma fahmaan. Inkasta oo Jackass uu leeyahay digniin horudhac ah si loo hubiyo in kuwa aan arkin ayan la imaan, jaceylka asal ahaanta ah waxaa badanaa la mabnuucay, oo ay ku jiraan kooxo badan oo ka tirsan Czech Republic.
Thomas Alan suga (* 7 1949. December Pomona, California, USA) waa gabayaa ah American, Fanaanada caanka ah, Xisbi iyo actor. Codkiisa naqdiya American Daniel Durchholz qoray: codka sifo iyo music in isku daraa chanson, blues, jazz iyo xubno tijaabo ah in mararka qaar ku dhow xuduudda la leh music warshadaha, suga ay dhisatay sumcad sida shakhsiyad muusikada xoog leh.
United States ee Olympics Summer ee Los Angeles 1984 522 matalayay ciyaaraha fudud (Dadka 339 183 iyo dumar) in nidaamo natiijada 217 25 sportech.Medailisté by macluumaad disciplínAtletikaPodrobnější, arki Fudud ee 1984.MužiMuži Olympics ee Xagaaga, 400 metrůAlonzo BabersRozběh - 45.81Čtvrtfinále - 44.75Semifinále - 45.17Finále - 44.27 (bilada dahabka →) Antonio McKayRozběh - 45.55Čtvrtfinále - 44.72Semifinále - 44.92Finále - 44.71 (→ biladda maarta) gooya NixRozběh - 45.42Čtvrtfinále - 45.31Semifinále - 45.51Finále - 44.75 (→ meel 5.) Ragga 5 000 metrůDoug PadillaRozběh - 13: 52.56Semifinále - 13: 41.73Finále - 13: 23.56 Don ClaryRozběh - 7 (→ 13 meel.): 44.97Semifinále - 13: 46.02 (→ ma loo horumariyo) Steve LacyRozběh - 13: 46.16Semifinále - 13: 46.65 (→ ma loo horumariyo) Ragga 10 000 metrůPat iridjoogihii Accel - 28: 19.94Finále - 28: 34.59 (→ Place 15.) Craig VirginRozběh - 28: 37.58 (→ ma loo horumariyo) Paul CummingsRozběh - 29: 09.82 (→ ma loo horumariyo) Ragga marathonPete Pfitzinger - 2: 13: 53 (→ 11. meel) Alberto Salazar - 2: 14:. 19 (→ 15 meel) John Tuttle - ma uusan dhammayn (→ jirin meel) Ragga boodi vysokýDwight StonesKvalifikace - 2.24mFinále - 2.31 (→ 4 meel) Doug NordquistKvalifikace - 2.24mFinále - 2.29 (→ 5.. meel) Milton GoodeKvalifikace - 2.24mFinále - iyada oo aan qoraal (→ aan goobta) Ragga boodi dalekýCarl LewisKvalifikace - 8.30mFinále - 8.54 (→ biladda dahabka) Larry MyricksKvalifikace - 8.02mFinále - 8.16 (→ 4 meel) Mike McRaeKvalifikace -. 7.89mFinále - 7.63 (→ 11. meel) Ragga trojskokAl JoynerFinále - 17.26 (→ biladda dahabka) Mike ConleyFinále - 17.18 (→ bilad lacag) Willie BanksFinále - 16.75 (→ 6 meel) Ragga pm oštěpemTom PetranoffKvalifikace -. 85.96mFinále - 78.40 (→ 10 meel) Duncan AtwoodKvalifikace. - 79.34mFinále - 78.10 (→ 11 meel.) Steve RollerKvalifikace - 75.50 (→ ma loo horumariyo, meel 18.) Ragga la Kok ku saabsan tyčiMike TullyKvalifikace - 5.45mFinále - 5.65 (→ bilad lacag) Earl BellKvalifikace - 5.45mFinále - 5.60 (→ biladda maarta ah)
Helixje Canadian waa dhagax adag / koox xoog leh oo lagu aasaasay 1974. Sheekadooda ugu caansan ee ka timid 1984 waa "Dhagacaad". The kor line asalka koobnaa durbaan garaace Bruce Arnold oo gabayaa ahaa hogaanka Brian Vollmer, guitarists Ron Watson iyo Rick "nin kataarad" Trembley keyboardist Don Simmons iyo bassist Keith "Bert" Zubrigg.
1997 Samiista Koobka Aduunka waa 26. Horyaal oo lagu qabtay 31. Agoosto iyo 7. September 1997 on Lake Lac d'Aiguebelette in Savoy ee Francii.Každoroční regatta dhibtoonaya hal todobaad waarta waxaa soo agaasimay Xiriirka caalamiga ah dhibtoonaya (International Xiriirka Doomaha, FISA), sida caadiga ah in xagaaga dambe ee u Safra waqooyiga. In sano non-Olympic, koobka adduunka ka dhigan dulucdii oo ka mid ah jadwalka dhibtoonaya caalamiga ah iyo sanadkii la soo dhaafay Olympic Games, waa dhacdo weyn ee isreebreebka. Ciyaaraha Olombikada, barnaamijka kubadda cagta waxaa ka mid ah maadooyinka aan ka ahayn Olympic.
Tartanka ragga ee Hockey ee ciyaaraha 2014 Winter Olympics waxaa ciyaaray 12. 23. Febraayo oo ku yaal Sochi garoonka Bolsai Ice Arena iyo garoomada Shaiba arena. Guushii Vancouver ayaa difaacday kooxda Canada markii ay ku guuleysteen 3: 0 final.
Connecticut Open waa tartan bilaash ah oo loogu talagalay dumarka, sanad walba wuxuu ciyaaray Wull Tour ee Connecticut New Haven, Xarunta Cullman-Heyman Tennis Center. Waxay ka dhacdaa bannaanka maxkamadaha adag oo leh dusha DecoTurf oo qayb ka ah qaybta WTA Premier. Tartanku wuxuu ka mid yahay safarada US Open Series North America, oo ah wareega toban-qaybood ee lagu ciyaaro inta lagu jiro lix asbuuc ka hor US Open.
The Falls: The Testament of Love waa filim muusigga American 2013 oo uu ku tilmaamay Jon Garcia sida uu qoray warqad u gaar ah. Filimku wuxuu daba socdaa qoraallada The Falls ka dib shan sano ka dib.
Alice Cooper waxa uu ku dhashay Vincent Damon Furnier (* 4. 1948 February Detroit, USA) waa American Fanaanada dhagax weyn, Xisbi, iyo muusikiiste kuwaas oo mustaqbalkiisa u dhexeeysa marxaladda kala bar století.S show in qoreysa guillotines, kuraasta korontada, dhiig been abuur ah iyo Strangler mas Boa Royal ahaa isku dhafka ah ee goobaha ka movies farxaan, cabaret, music, biraha culus oo dhagaxii garaashka, dhigay caanka ah by Alice Cooper brand masrixiyada of music dhagax weyn in noqday yaqaan dhagax weyn lama filaan ah.
Uriah Heep waa koox dhagax ah oo British ah oo aasaasay 1969 London. Laba iyo toban ka mid ah albums ay gaareen Qaasaali UK Kaartada (laabtay gaari khiyaali ah maqaal qoruhu 7 1975. Sannaddii), halka shan iyo toban albums Uuriyaah Heep in boor 200 ahaa Jinniyona guul & Wizards (#23, 1972) si wadajir ah ula koox hoggaamiyo Zeppelin, Black sabtida iyo Deep Purple Uuriyaah Heep noqday mid ka mid ah kooxaha dhagax weyn top of hore 70 ah. sano.
Under Cover waa albaabka sagaalaad ee solo studio ee heesaha Britishka Ozzy Osbourne ee bishii Nofembar soo saaray by 2005 ee Epic Records. Hantidhawrku wuxuu ahaa Mark Hudson oo albaabkana waxaa lagu dhajiyay 134. kuqore Billboard 200. Albaanku wuxuu ka koobanyahay oo kaliya; mid ka mid ah, "Mississippi Queen" oo ka timi Buur Mountain, ayaa sidoo kale u muuqday mid keliya. Jidadkan, wuxuu ku ciyaaraa guitar Leslie West, xubin ka mid ah kooxda buurta iyo qoraaga heesaha. Sheekada "Dhammaan Dhallinta Dudes", heesaha Ian Hunter ayaa ku heesaya sheekada asalka ah ee Mott the Hoople.
Ice Championships World Hockey aqoonyahanada 2015 16 goob joog ka ahaa xulka qaranka. Koox walba waa in uu leeyahay ugu yaraan Skaters Xulka 15 (weeraray iyo difaacayaasha) iyo laba goolhaye oo ugu 22 Skaters saddex goolhayaha.
Richard Laughlain "Lochlyn" Munro (* 12 Febraayo 1966, Lac La Hache, British Columbia, Kanada) waa jilaa Kanada ah. Wuxuu caan ku yahay doorka filimada sida Night at Roxbury, Movie Scary, Qaar ka mid ah Blond iyo Freddy iwm. Jason. Sanadihii la soo dhaafay 1999-2000 wuxuu ciyaaray orodka Jack Sheridan ee rikoodhka jilicsan ee Witches. Waxaa loo xisaabiyaa in ka badan kaalinta 200 ee riwaayadaha iyo filimada.
1942 (MCMXLII) wuxuu ahaa sanadka bilaabmay sida ku cad jadwalka Gregorian Khamiista. Dhacdooyinka Shahaadooyinka Bohemia iyo Moravia21. March - Scopt. Václav Moravek, oo ah firfircoonida ugu dheer ee Saddexda Boqortooyada, ayaa ku geeriyootay rasaas ay la socdeen dhowr wakiil oo ka tirsan Gestapo27. May - Jozef Gabčík iyo Jan Kubiš waxay qabsadeen hawlgalka Anthropoid waxayna soo saareen Ku-xigeenkii Reich iyo Madaxa RSHA Reinhard Heydrich10. Juun - Jarmalka Nazis ayaa diley tuulada Lidice ee Kladna18. June - toddoba qof oo askar ah ayaa lagu qariyay kaniisadda St. Cyril iyo Methodius (Adolf Opalka, Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublik, Jan Hruby, Jaroslav Svarc)
Gift waa mid ka mid ah banneeyey Nicmoolayda waxa ugu sareeya ee Mormonism (inkastoo aan dhan xaflad Mormon garashada waaxdan) .Obdarování la soo bandhigay tan iyo aasaasaha 1842 Mormon Joseph Smith oo qayb ka ah cibaadaysi qarsoodi ah gudaha Church Mormon ah. Currently, iyada oo hibeynta CJKSPD iyada oo xubin kasta oo dadka waaweyn, haddii mid istaahila. Qof waliba waxaa lagu dhiirrigeliyaa inuu qabto munaasabadda Glorious Rite. Munaasabadda waxaa casriyey dhowr jeer taariikhda oo dhan. CJKSPD Sida laga soo xigtay nin deified ma noqon oo aanay ka joogitaanka Ilaah oo jannada aan xaflad Gift noqon karin ..